“သူမနေ့စဉ်ပြုတဲ့ကုသိုလ်လေးတွေကို ပရိသတ်တွေအတွက် မျှဝေလာခဲ့တဲ့ စိုးမြတ်နန္ဒာ” - Cele Connections
“သူမနေ့စဉ်ပြုတဲ့ကုသိုလ်လေးတွေကို ပရိသတ်တွေအတွက် မျှဝေလာခဲ့တဲ့ စိုးမြတ်နန္ဒာ”
သဘာဝကျကျ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ သရုပ်ဆောင်ကောင်းတဲ့ မင်းသမီးချော စိုးမြတ်နန္ဒာကိုတော့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်ခင် ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်နော်..။ “မာမီရယ် ရှာပေးကွယ် နံပါတ်ဝမ်း.. လိုချင်တယ်” ကြော်ငြာအသံလေးကြားတာနဲ့ မင်းသမီးစိုးမြတ်နန္ဒာလေးကို သွားမြင်မိမယ် ထင်ပါတယ်..။ ချစ်ဖို့ကောင်းလွန်းတဲ့ အမူအရာလေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းကို သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်..။ လက်ရှိမှာ စိုးမြတ်နန္ဒာကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကို မလုပ်ကိုင်တော့ဘဲ စီးပွားရေးကိုသာ ဦးစားပေးလုပ်ကိုင်ကာ အေးချမ်းစွာ ဘဝကို ဖြတ်သန်းနေသူ ပဲဖြစ်ပါတယ်..။
အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိတော့ပေမယ့် ချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ လက်ရှိအချိန်ထိ ဒါဒါလေးကို ချစ်ခင် အားပေးနေဆဲပါ..။ သူမရဲ့ နေ့စဉ် ဖြတ်သန်းနေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူ ပရိသတ်တွေနဲ့ Live လွှင့်ကာ ရင်းရင်းနှီးနှီး ပြောဆိုလေ့ရှိသူပါ..။ ဒီနေ့ဧပြီလ (၉)ရက်နေ့မှာတော့ သူမနေ့တိုင်း ယူဖြစ်တဲ့ ကုသိုလ်လေးကို ပရိသတ်တွေအတွက် မျှဝေကာ “နေ့စဉ်ပြုတဲ့ကုသိုလ်…. သူများတွေလို အဓိဌာန်ရယ်လို့ အများကြီးမလုပ်နိုင်ပါဘူး .. ။ ရေလမ်းပန်းလမ်းမီးလမ်း တို့ ဓာတ်ကြီးလေးပါး တို့လည်း လုပ်ချင်ပေမဲ့ တစ်ခါမှ မလုပ်ဖူးပါဘူး .. ။ ဒါပေမဲ့ နေ့စဉ် ဒါလေးတွေတော့ အချိန်လေးတွေခွဲပြီး မပျက်မကွက်ပူဇော်ဖြစ်ပါတယ် …။ အကျိုးကျေးဇူးကတော့ ဘဝမှာလိုရာဆန္ဒပြည့်ဝသလို အခက်ခဲတိုင်းကို အောင်မြင်စွာ ကျော်လွှားနိုင်ပါတယ်..။ ကိုယ့်အပေါ် မကောင်းကြံတဲ့သူတွေလည်း သူတို့ စိတ်နဲ့သူတို့ အကျိုးပေးခံရပါတယ် ..။
လောကဓံ ၈ ပါးကိုလဲ အပြုံးနဲ့ ရင်ဆိုင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ် .. ။ ဒါတွေပူဇော်ဖို့ ရယ် အကျိုးလိုစိတ်နဲ့မပူဇော်ဖို့ ဆိုဆုံးမတဲ့ ဆရာသမားတွေကို ရိုသေစွာကန်တော့လိုက်ပါတယ်။ နေ့စဉ်ဘာကုသိုလ်လေးတွေ လုပ်ကြ/ပူဇော်ကြလဲဆိုတာ ပြောပြပါနော်..။SMND” ဆိုပြီး သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် နေ့စဉ်ယူဖြစ်နေတဲ့ သီလကုသိုလ်လေးကို သူမရဲ့ ပရိသတ်တွေလည်း တစ်နိုင်တစ်ပိုင် လုပ်ဆောင်ကာ ကုသိုလ်ယူနိုင်အောင် မျှဝေတင်ပေးလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော် ပရိသတ်ကြီး..။ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအတွက်လည်း စိုးမြတ်နန္ဒာရဲ့ နေ့စဉ်ကုသိုလ်ယူနည်းလေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်..။
Source: SOE MYAT NANDAR’s Facebook
“သူမနစေ့ဉျပွုတဲ့ကုသိုလျလေးတှကေို ပရိသတျတှအေတှကျ မြှဝလောခဲ့တဲ့ စိုးမွတျနန်ဒာ”
သဘာဝကကြ သရုပျဆောငျခကျြတှနေဲ့ သရုပျဆောငျကောငျးတဲ့ မငျးသမီးခြော စိုးမွတျနန်ဒာကိုတော့ Cele Connections ပရိသတျကွီးလညျး ခဈြခငျ ရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျ ထငျပါတယျနျော..။ “မာမီရယျ ရှာပေးကှယျ နံပါတျဝမျး.. လိုခငျြတယျ” ကွျောငွာအသံလေးကွားတာနဲ့ မငျးသမီးစိုးမွတျနန်ဒာလေးကို သှားမွငျမိမယျ ထငျပါတယျ..။ ခဈြဖို့ကောငျးလှနျးတဲ့ အမူအရာလေးတှနေဲ့ ပရိသတျတှရေဲ့ အသညျးကို သိမျးပိုကျခဲ့တဲ့ မငျးသမီးတဈလကျပဲဖွဈပါတယျ..။ လကျရှိမှာ စိုးမွတျနန်ဒာကတော့ အနုပညာအလုပျတှကေို မလုပျကိုငျတော့ဘဲ စီးပှားရေးကိုသာ ဦးစားပေးလုပျကိုငျကာ အေးခမျြးစှာ ဘဝကို ဖွတျသနျးနသေူပဲဖွဈပါတယျ..။
အနုပညာအလုပျတှကေို လုပျကိုငျခွငျးမရှိတော့ပမေယျ့ ခဈြရတဲ့ ပရိသတျတှကေတော့ လကျရှိအခြိနျထိ ဒါဒါလေးကို ခဈြခငျ အားပေးနဆေဲပါ..။ သူမရဲ့ နစေ့ဉျ ဖွတျသနျးနတေဲ့ ပုံရိပျလေးတှနေဲ့အတူ ပရိသတျတှနေဲ့ Live လှငျ့ကာ ရငျးရငျးနှီးနှီး ပွောဆိုလရှေိ့သူပါ..။ ဒီနေ့ဧပွီလ (၉)ရကျနမှေ့ာတော့ သူမနတေို့ငျး ယူဖွဈတဲ့ ကုသိုလျလေးကို ပရိသတျတှအေတှကျ မြှဝကော “နစေ့ဉျပွုတဲ့ကုသိုလျ…. သူမြားတှလေို အဓိဌာနျရယျလို့ အမြားကွီးမလုပျနိုငျပါဘူး .. ။ ရလေမျးပနျးလမျးမီးလမျး တို့ ဓာတျကွီးလေးပါး တို့လညျး လုပျခငျြပမေဲ့ တဈခါမှ မလုပျဖူးပါဘူး .. ။ ဒါပမေဲ့ နစေ့ဉျ ဒါလေးတှတေော့ အခြိနျလေးတှခှေဲပွီး မပကျြမကှကျပူဇျောဖွဈပါတယျ …။ အကြိုးကြေးဇူးကတော့ ဘဝမှာလိုရာဆန်ဒပွညျ့ဝသလို အခကျခဲတိုငျးကို အောငျမွငျစှာ ကြျောလှားနိုငျပါတယျ..။ ကိုယျ့အပျေါ မကောငျးကွံတဲ့သူတှလေညျး သူတို့ စိတျနဲ့သူတို့ အကြိုးပေးခံရပါတယျ ..။
လောကဓံ ၈ ပါးကိုလဲ အပွုံးနဲ့ ရငျဆိုငျနိုငျစှမျးရှိပါတယျ .. ။ ဒါတှပေူဇျောဖို့ ရယျ အကြိုးလိုစိတျနဲ့မပူဇျောဖို့ ဆိုဆုံးမတဲ့ ဆရာသမားတှကေို ရိုသစှောကနျတော့လိုကျပါတယျ။ နစေ့ဉျဘာကုသိုလျလေးတှေ လုပျကွ/ပူဇျောကွလဲဆိုတာ ပွောပွပါနျော..။SMND” ဆိုပွီး သူမရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျလာခဲ့ပါတယျ။ ကိုယျတိုငျ နစေ့ဉျယူဖွဈနတေဲ့ သီလကုသိုလျလေးကို သူမရဲ့ ပရိသတျတှလေညျး တဈနိုငျတဈပိုငျ လုပျဆောငျကာ ကုသိုလျယူနိုငျအောငျ မြှဝတေငျပေးလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျနျော ပရိသတျကွီး..။ Cele Connections ပရိသတျကွီးအတှကျလညျး စိုးမွတျနန်ဒာရဲ့ နစေ့ဉျကုသိုလျယူနညျးလေးကို ပွနျလညျမြှဝေ ပေးလိုကျပါတယျနျော..။
(၁၀)တန်းစာမေးပွဲ ကျရှုံးသွားတဲ့ ညီမလေး စိမ်းလဲ့ကို မဆူတဲ့အပြင် နားလည်မှုအပြည့်နဲ့ အားပေးစကားပြောခဲ့တဲ့ နေခြည်ဦး
“မေမေဆုပန်ထွာနဲ့အပြိုင် မရှုံးလောက်တဲ့ အိုက်တင်တွေနဲ့ အသည်းတယားယားဖြစ်လောက်အောင် ချစ်ဖို့ကောင်းနေတဲ့ ဆုပန်ထွာသားလေး Roar Roar ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်”
“ဂီတလောကသားတွေ အခုလိုအချိန်မှာ ဖန်တီးခဲ့တဲ့ အနုပညာတွေဆီကနေ ဝင်ငွေရနေပေမယ့် ရုပ်ရှင်လောကသားတွေ ကျပ်တည်းသွားရတဲ့အပေါ် သူ့အမြင်တွေကို ပွင့်လင်းစွာ ချပြပြောလာတဲ့ နေထူးနိုင်”